सम्बन्ध विच्छेद गर्नेमा पुरुष बढी !
नयाँ मुलुकी संहिताले सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुषलाई पनि सहज बनाएपछि जिल्ला अदालतमा सम्बद्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दिने पुरुषको सङ्ख्या बढेको छ । यहाँ दुई सातामा १४ जना पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा दर्ता गराएका छन् ।
अर्कै युवतीसँग बस्ने श्रीमानसँग ‘डिभोर्स’ माग्दा पीडकलाई उन्मुक्ति
डिभोर्सका लागि जब यी अभिनेताहरुले करोडौ सम्पत्ति दिए
बलिउड स्टारहरुको लवस्टोरीको बारेमा धेरै नै रिपोर्टहरु मिडियामा आउने गर्छन् । त्यो भन्दा पनि बढी उनीहरुको डिभोर्सको चर्चा गर्छन् ।
श्रीमतीबाट पीडित श्रीमानले पनि सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिन पाउने
काठमाडौं । के तपाईं श्रीमतीबाट पीडित हुनुहुन्छ ? जीवनभरि पीडित भएर श्रीमतीले पनि सम्बन्ध विच्छेद नगर्दा मानसिक तनाव झेलिरहनुभएको त छैन ?
रोनाल्डो र मेस्सीका कारण श्रीमान श्रीमतीको डिभोर्स !
विश्वकपको सरगर्मी चौतर्फी बढेको छ । यस्तैमा रोनाल्डो र मेस्सीका कारण एक जोडीको डिभाेर्स नै भएको छ । एकजना रसियनले श्रीमतीसँग डिभोर्स पाउ भन्दै अदालतमा याचिका दायर गरेका छन् ।